Turkiga oo qaaday tallaabo dhabar jab ku ah reer galbeedka | Xaysimo
Home War Turkiga oo qaaday tallaabo dhabar jab ku ah reer galbeedka
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu amray 10 safiir oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka iyo Faransiiska in dalka aan looga baahnayn oo ay ka baxaan isagoo adeegsanaya Persona non grata.
Tallaabadan ayaa waxay daba socotaa bayaan ka soo baxay ergooyinkan oo ku baaqaya in si deg deg ah loo sii daayo Osman Kavala oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini’adanimada.
Muddo afar sano ka badan ayuu xabsiga ugu jiray sababo la xiriira mudaaharaadyo iyo isku day afgambi, inkastoo aan la xukumin.
Persona non grata waxay ka saari kartaa maqaamka diblomaasiyadeed waxayna badanaa keentaa cayrinta ama kala noqoshada aqoonsiga ergooyinka.
Qoraalkii toddobaadkan ee Mr Kavala ayaa si wadajir ah uga yimid safaaradaha Mareykanka, Kanada, Faransiiska, Finland, Denmark, Jarmalka, Netherlands, New Zealand, Norway iyo Sweden.
Isaga oo maanta khudbad u jeedinayay dad isugu soo baxay Eskisehir, Mr Erdogan ayaa sheegay in danjirayaasha “aysan ku dhiiran karin inay yimaadaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga oo ay amar bixiyaan”.
Wuxuu yiri: “Waxaan siiyay amarka lagama maarmaanka u ah wasiirkeenna arrimaha dibadda. 10 -kan safiir waa in hal mar lagu dhawaaqaa go’aanka persona non grata.”
Si kastaba ha ahaatee, waxa dhici doona hadda weli ma cadda.
Mr Erdogan ayaa sheegay in safiiradaan ay tahay inay fahmaan Turkiga ama ay baxaan, warbaahinta Turkiga ayaasidaasi werisay.
Wasaaradda arrimaha dibedda ayaa u yeertay safiirada maalinta Talaadaha ah si ay u sharaxaan bayaankooda “mas’uuliyad darrada ah” ee ku saabsan kiiska Kavala.
Bayaanka safaaradaha ayaa lagu dhaleeceeyay “dib -u -dhacyada sii daba dheeraanaya” ee maxkamadeynta Cismaan Kavala, taas oo “mugdi gelisay ixtiraamka dimuqraadiyadda, sarreynta sharciga iyo hufnaanta nidaamka garsoorka Turkiga”.
Waxay ku baaqayaan in si degdegga ah loo sii daayo Cismaan”.
Mr Kavala ayaa sanadkii hore lagu waayay wax dacwad ah oo ku saabsan mudaaharaadyo dalka oo dhan ka dhacay sanadkii 2013 -kii, laakiin isla markiiba dib ayaa loo xiray.
Go’aankii siidayntiisa ayaa la buriyay waxaana lagu daray eedeymo cusub oo la xiriira isku daygii afgambi ee milateri ee ka dhanka ahaa xukuumadda Erdogan ee sanadkii 2016 -kii.
Golaha Yurub, oo ah hay’adda ugu weyn ee ilaalisa xuquuqda aadanaha ee Yurub, ayaa Turkiga siisay digniintii ugu dambaysay ee ahayd inay u hoggaansamaan go’aanka Maxkamadda Yurub ee Xuquuqda Aadanaha si loo sii daayo Mr Kavala inta dacwaddu socoto.